यी हुन याैन सम्बन्धका १० गुरुमन्त्र - Everest Dainik - News from Nepal
यी हुन याैन सम्बन्धका १० गुरुमन्त्र
याैन सम्बन्धकाे साेझाे सम्बन्ध मनसँग जाेडिएकाे छ । दुबै रमाउन सकिएन भने याे रमाईलाे पफ पीडादायी हुन बेर लाग्दैन ।
त्यसैले याैनमा एक अर्काकाे भावना बुझेर सम्बन्ध अघि बढाउनु पर्छ । हतार या जबर्जस्तीले झन कुण्ठा जन्माउछ ।
याैन सम्बन्धका गुरुमन्त्र बुझ्न सकियाे भने याे निकै सुखद हुनेमा दुईमत छैन ।
याैनका मुख्य कुराहरु
२. सम्भोगका बेला जोडीको मूडलाई ध्यानमा राख्नुहोस् । यदि जोडीको मुड खराब छ भने आफ्नो माया र स्पर्शले पहिले उसको मुडलाई सही ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्नुहोस् तर सम्भोगका लागि जोडी तयार नहुँदै कर नगर्नुहोस्।
याे पनि पढ्नुस किशोरकिशोरी भन्छन्– ‘कण्डम लगाएर मज्जा नै आउँदैन’
७. सम्भोगका बेला पाक्क्रीडामा बढि जोड दिनुहोस् । यसले तपाईंं र तपाईंंको जोडीलाई बढी चरमसुख प्राप्त हुन्छ
याे पनि पढ्नुस किन चिलाउँछ गुप्तांग, के गर्ने के नगर्ने ?